Biyaha, Hilibka, Iyo Bariiska Oo Cunistooda La Isku Badiyaa Waxa Ay Keentaa Caafimaad Darro Tiro Badan
Wednesday June, 20 2018 - 00:32:07
Wednesday August 31, 2016 - 09:51:41 in by Burco Office
Culimada ku xeeldheer caafimaadka cuntadu waxa ay mar kasta ku taliyaan qof kastaa uu iska hubiyo saamaynta caafimaad ee ay yeelan karto cuntada uu cunayaa, iyo in xaddiga uu ka cunayaa uu noqdo mid xaddidan, maadaama oo ku talax tagga cuntooyinka qa
Culimada ku xeeldheer caafimaadka cuntadu waxa ay mar kasta ku taliyaan qof kastaa uu iska hubiyo saamaynta caafimaad ee ay yeelan karto cuntada uu cunayaa, iyo in xaddiga uu ka cunayaa uu noqdo mid xaddidan, maadaama oo ku talax tagga cuntooyinka qaarkooday keeni karaan xaalado caafimaad darro.
Qormadan oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay shabakadda wararka Ruushka ee Russia today, waxa ay soo bandhigaysaa cuntooyin ay khubaradu sheegeen in cuntooyinka qaar cunistooda oo la isku badiyaa ay qofka ku keento caafimaad darro, waxa aana ka mid ah:
1. Hilibka xoolaha:
Hilibka xoolaha oo ay qolyaha caafimaadku ku magacaabaan hilibka cas iyaga oo ka soocayaa hilibada digaagga iyo kalluunka oo isagana lagu magacaabo hilibka cad. Laakiin khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in hilibka xoolaha oo cunistiisa la isku badiyaa ay keento dhibaatooyin badan oo caafimaad, gaar ahaan marka uu qofku muddo caadaysto cunista hilibka. Iyaga oo sheegay in dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha ay ka mid yihiin, Caabuq uu ku keeno xaglaha (Laabatooyinka), dhibaatooyin caafimaad darro oo uu wadnaha ku keeno iyo , in maadadda xadiidka oo aad ugu badani ay beerka ku keento burbur iyo in uu shaqadiisa gabo.
2. Bariiska bunniga ah (Case e aan boosh caddaha ahayn):
Dunida waxaa aad ugu sii badanaya isticmaalka bariiska nooca midabkiisu cawlan yahay, halkii hore dunida uu ugu badnaa isticmaalka bariiska midabkiisu caddaanka yahay. Haddaba cilmibaadhiso dhowaan natiijadoodu soo baxday ayaa daahfuray in bariiskan uu ku jiro xaddi aad u badan oo ah maadadda sunta ah ee Arsenic, oo raadayn taban oo caafimaadka khatar ah ku yeelata hab-dhiska difaaca ee qofka, korna u qaadda khatarta ah in qofka ay ku dhacaan cudurrada haleela hab-dhiska difaaca jidhka, marinnada dhiigga / halbawlayaasha ku dhaca, wadne xanuunka, iyo cudurro kale.
Waa suurtogal in dad badani marka koowaad ee ishoodu ku dhacdo biyaha oo caafimaad darro lala xidhiidhinayo in uu u qaato in wax qaldan yihiin, waayo jidhka qofka qaangaadhka ah waa ay khubaradu xaqiijiyeen in biyuhu ay ka yihiin boqolkiiba 65, sidaa awgeed in biyuhu jidhka ku yaraadaan ama uu ingagaa waxa ay keentaa khataro badan oo caafimaad sidaa awgeed ay fiican tahay in qofku maalin kasta cabbo laba illaa saddex litir oo biyo ah. Laakiin warkaas hore oo sax ah waxaa soo raaca warka ku cad natiijada cilmibaadhistan cusub oo sheegaysa in biyaha oo qofka jidhkiisa kaga bata inta uu dabiici ahaan u badan yahay, ay sababto dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn oo xitaa mararka qaar gaadhi kara dhimasho.